‘उत्तर कोरिया’ अर्थात् रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाः जहाँका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खाना कै चिन्ता – Complete Nepali News Portal
मुलुक संघीयतामा जानुपूर्व सदरमुकामका होटलहरूमा नक्कली माइन्यूट बनाउने र बिल मिलाएर सरकारी बजेट खाने गरेको चर्चा यदाकदा सुनिन्थ्यो । संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार बने र ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको भनियो । अधिकार गाउँमै प्रत्यायोजन भएको कुरा पनि सत्य हो । तर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाँचवर्षको संघार टेकिसक्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कुन ‘सिस्टम’को अभ्यास गरिरहेका छन् वा बसालेका छन्, त्यो भने समीक्षा गर्नैपर्ने विषय हो ।
‘सिस्टम’को सबैभन्दा ठूला कुरा गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सेलिब्रेटी हुने रहरले पिरोलिरहेको छ । जस्तोसुकै स्टन्ट गरेर हुन्छ– बस् ‘सेलिब्रेटी’ भए भो । नेपाली कांग्रेस निकट विचार राख्ने हाकिम र सोही विचार समर्थक लेखापालको गतिविधिले उपभोक्ता समेत वाक्क छन् । यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षले समेत ‘सबै उनीहरुकै हातमा भएको’ स्वीकार गरे । अनि माओवादीले क्लिनस्वीप गरेको भनेर छाती फुलाएर हिड्ने कार्यकर्तालाई अब इस्स…. भन्ने ?
यसलाई सारांशमा भन्दा लोक कल्याणकारी ‘सिस्टम’ बसाउने कुरा हो । सही ‘सिस्टम’का लागि सही नेतृत्वको पनि जरुरत हुन्छ । गलत कुराको विरोध गर्न तेरो–मेरोको घेराभन्दा माथि उठेर राम्रोको पक्षमा लागौं । तर राम्रोको आशामा समर्थन गर्दागर्दै पनि भीरतिर साेंझिएकाहरुलाई भन्न त राम राम शब्द नै काफी छ ।